Xanuunno ku soo badanaya Garbahaareey
Garbahaareey 15 Feb, 2012Sida ay Raadiyo Ergo u sheegeen saraakiisha caafimaadka magaalada Garbahaarrey ee xarunta gobolka Gedo, waxaa halkaas ka taagan dhibaato caafimaad oo ay dhaqaatiirta ku sheegeen inay ku tahay khatar bukaanno fara badan.
Howlwadeennada caafimaadka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo ka yar hal toddobaad ay soo gaareen in ka badan 150 qof oo ka cabanaya xanuunno isugu jira shuban iyo duumo, taasoo muujineysa sida ay u badan yihiin bukaannad iyo sida ay halis u tahay xaaladda caafimaad ee dadka ku nool halkaasi. Saraakiisha caafimaadka waxay intaas raaciyeen in cudurrada ka jira gobolka, gaar ahaan magaalada Garbahaarrey ay aad ufara badan yihiin, laakiin kuwa ugu badan oo ay dadku la xanuunsanayaan ay ugu daran yihiin sida duumada oo la tilmaamay iney si weyn u jirto, shubanka iyo nafaqo darro baahsan.
Dr. Aadan Goomeey oo ah maamulaha cisbitaalka Garbahaarrey ayaa u sheegay Raadiyo Ergo, inay bishii qaabilaan bukaanno kor u dhaafaya 1,500 oo qof sida uu sheegay.
"Seddex cudur baa hadda ugu badan cudurrada ay qabaan dadka naloo keeno, waxaana ka mid ah duumada, 1,500 oo qof oo 1 bil ah aanu qaabilnay, waa tiro aad u badan runtii." ayuu yiri Dr. Aadan Goomeey.
Dr. Aadan oo ka hadlayay sababta keentay in heerarka nafaqo darro ay sare u kacaan, ayaa wuxuu sheegay in beerihii oo aan wali soo go`in (la guran), iyo baahidii oo wali sii jirta ay tahay dhibaatada ugu badan.
“ Marka aanu ka hadlayno shubanka waxaa sabab u ah dadka oo caba biyo aan nadiif ahayn, oo ay wada isticmaalaan iyaga iyo xoolaha.”
Horraan ayaa waxaa jirtay cabashooyin noocaas ah oo ka soo baxayay howlwadeennada iyo bukaannada cisbitaalka degmada deg Ceel-Waaq ee gobolka Gedo Nuur Cali Faarax/MG/FM
Dad naafo ah oo tababar caafimaad uga furmay Kismaayo